ओलीलाई प्रचण्डको कटाक्षः पार्टी फुटाएर तीन टुक्रा बनाउने, नाम चाहीँ एकता महाधिवेशन राख्ने !
नेपाली पब्लिक बुधबार, मंसिर १५, २०७८
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको पार्टीको महाधिवेशनप्रति कटाक्ष गरेका छन् ।
राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य राख्दै बुधबार प्रचण्डले ओलीले पार्टी फुटाएर गरेको महाधिवेशनको नाम एकता राखेको भन्दै कटाक्ष गरे ।
राप्रपाको पहिलो एकता महाधिवेशन सुरू
‘राप्रपाले पार्टी एकता गरेर एकता महाधिवेशन गर्यो । तपाईंहरूले जे गर्नुभयो, नाम पनि त्यहीँ राख्नुभयो’, एमाले महाधिवेशनप्रति कटाक्ष गर्दै प्रचण्डले भने, ‘पार्टी फुटाएर तीन टुक्रा बनाउने, नाम चाहीँ एकता महाधिवेशन राख्ने जाली झेली कुरा पनि भर्खँरै देखियो ।’
सीपी मैनालीलाई बधाई !
प्रचण्डले नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गरेको भन्दै ब्यंग्य गरे । राप्रपाको महाधिवेशन उद्घाटन शत्रमा प्रचण्ड भन्दा अगाडि मन्तव्य राखेका मैनालीले देशभक्तिको मामिलामा राजा महेन्द्रको योगदान सराह्रनीय रहेको भनेपछि प्रचण्डले उनीमाथि व्यंग्य गरेका हुन् ।
‘राजतन्त्र निरंकुश भएकोले हटाउनुपर्छ भनेर टाउको काट्ने आन्दोलनको सुरुवात सीपी मैनालीजीहरूले नै गरेको हो । अहिले आएर राजा महान् भन्दिनु भो । मलाई लाग्यो सीपीजी राप्रपाको अध्यक्ष बन्न पो खोजेको हो कि ? हो भने शुभकामना छ’, प्रचण्डले व्यंग्य गर्दै भने ।
#प्रचण्ड #केपी_शर्मा_ओली #राप्रपा_महाधिवेशन
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १५, २०७८ १३:५३